काठमाडौँ । देश भित्र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको समाचारहरु न सुनिने कुनै दिन बाकी न होला । नाबालिका देखि किशोरीहरु त्यसै गरी आफ्नै आफन्त देखि अन्जानहरुबाट बालिकाहरु बलात्कृत हुने गरेका छन । बलात्कारको समाचार आउछ पिडा हुन्छ तर त्यो बलात्कारीलाई कस्तो सजाय हुन्छ त्यो सर्बसाधारणलाई केहि पत्तो हुन्न । यस्तै समाज सेवामा लागी परेकी सामाजिक अभियन्ता इशा गुरुङले सामाजिक संजालमा उनको चरित्र हत्या गरियो भन्दै तलको स्टाटस पोस्ट गरेकी छन् । उनले सबैलाई यो अपराधको बिरोधमा भिडियो शेयर गरी जागरुक गराउन अनुरोध समेत गरेकी छिन् ।
उनि भन्छिन : न म लेखिका , न म बुद्गिजिबि , न म राजनितिज्ञ , न म कुनै पार्टीको समर्थक , न म बरिश्ट समाजसेबी , न म सेलिब्रिटी , न म पब्लिक फिगर , तर पनि मलाइ पटक पटक मैले नलेखेका कुराहरू र नबोलेका कुराहरू फेंक एडिट पोस्ट गरेर किन रबी जी र धुमुश सुन्तलीहरूको बारेमा अनाब तनाब फेंक पोस्ट गरेर चरित्र हत्या गरिन्छ ?? के मेरो गल्ती २/४ पैसा उठाएर गरीबहरूका लागी मानब सेवा गर्नु नै मेरो कमजोरी हो ? के यहि मेरो गल्ती हो ? म जाबो लाइ २/४ सय जना मान्छेले चिन्छन् तर पनि किन मेरो पछि यसरी हात धोएर लाग्छन् ?? यदि हजुरहरू लाइ मेरो चरित्र हत्या गरेर मनमा शान्ति मिल्छ भने गर्नुस , भगवान् छ र मलाइ चिन्नेहरू केहि असल मानिसहरू यो सामाजिक संजालमा अझै जिबित नै छन् ..दुख लाग्छ यस्ता निच काम गर्नेहरू प्रति ।